Gboard ndiyo itsva Google keyboard yeIOS ine integrated injini yekutsvaga | IPhone nhau
Pazvakaita sekunge vavandudzi ivo vaive vakanganwa nezve yechitatu-bato keyboards eIOS, makambani makuru nevakwikwidzi veApple, Microsoft neGoogle vakatarisa chiitiko chavo mukugadzira makhibhodi matsva eiyo ecosystem. Rinopfuura vhiki rapfuura, Microsoft yakaburitsa yekutanga keyboard yeIOS, iyo keyboard isinganyatsotipa chero chinhu chatakaona kusvika parizvino, sezvo isiri iyo denderedzwa keyboard isu tanga takamirira uye izvo sezviri pachena zvicharamba zvakadaro kutora mwedzi mishoma kuti usvike.
Nechikamu chayo, mumwe mukwikwidzi weApple, Google ichangoburitsa yakatarwa khibhodi yeIOS, iyo vashandisi vanogona kutsvaga zvivakwa kana mabhizinesi ekugovana zvakananga kubva kune chero mameseji application kubva kune chero application. Asi zvinotipawo kugona kutumira maGIF, ayo akasekesa mini-mavhidhiyo ayo kwenguva yakati zvino anoita kunge akatsiva mashandisiro emota dzinonetesa dzave nesu kwemakore mazhinji. Uye kana zvisina kukwana, Tinogona zvakare kutsvaga mavhidhiyo kuburikidza neYouTube. Izvo chete asi izvo zvatinoona nezve ino keyboard ndeyekuti haitsigire kududzirwa kwezwi, nekuda kwezvirambidzo zveApple nevechitatu-bato kunyorera.
Gboard inoshanda semamwe makhibhodi, kutsvedza pamusoro petsamba kugadzira mazwi atinoda kunyora, kunyangwe isu tichigona zvakare kudzima iri basa kuti rishande sekhibhodi yakajairika. Asi zvinonyatso kuonekera ndeye yakatsaurwa bhatani kukumbira iyo Google yekutsvaga injini uye ita kutsvaga kwatinoda. Nekuda kwebhatani iri, hazvichadiwe kuti tiende kubhurawuza kunotsvaga kero, nhamba dzerunhare kana ruzivo rwehuwandu nezve chero nzvimbo yatinenge tichishanyira uye yatiri kuda kugovana neshamwari kana mhuri kuburikidza neakasiyana mafomu atakaisa pane yedu iPhone. Nehurombo, iyi keyboard nyowani inongowanikwa muChirungu, kubvira panguva ino kuwanikwa kwayo kunogumira kuUnited States App Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Gboard ndiyo itsva Google keyboard yeIOS ine yakasanganiswa yekutsvaga injini
chokwadi ndechekuti ini ndanga ndisingazive kuti Google yanga ichigadzira keyboard, asi zvinoita senge yakanaka imwe nzira kune yekuzvarwa iOS keyboard
Ini handisi kunyanya kushandisa yechitatu bato kiyibhodhi, asi nekukurumidza painongowanikwa muSpain ini ndichazviedza
Pfungwa nyowani ye iPhone 7 ine iOS 10